Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah u furay Kalfadhigii Baarlamanka dalka. – Nabad & Nolol
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga 4-aad ee baarlamanka soomaaliya. Madaxweyne maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu halkaas ka soo jeediyay khudbad muhiim ah oo ka hadleysa wixii qabsoomay mudadii uu xilka hayay iyo guulaha la taaban karo ee la gaaray.
Khudbada Madaxweynaha oo ahayd mid dheer, waxaan halkan idiin ku soo gudbineynaa qayb kooban oo qoraal ah.
“Dalkeennu wuxuu ku jiraa geeddi-socod siyaasadeed, dhaqaale, amni iyo bulsho. Qof kasta oo inaga mid ahna mas’uuliyad ayaa ka saaran arrimahaas oo ay tahay in dhammaan laga soo wada dhalaalo.”
“Dhammaan shuruudihii muddadooda la gaaray ee ku xirnaa cafiska daynta waan ku guuleysannay, taas ayaana sababtay in Midowga Yurub uu inoo ballan-qaaday taageero miisaaniyadeed oo gaareysa $120 milyan.”
“Waxaa guul inoo ah in aanu bilihii na soo dhaafay dadaal ku bixinnay sidii loo dhammeyn lahaa isfaham darradii ka dhex jirtay waddamada Gobolka, taas oo mira-dhalkeedu noqday in dalalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti iyo Eritereeya ay isfaham ka garaan xurguftii ka dhaxeysay. Waxaan soo xirnay albaabkii u dambeeyay ee isfaham darrada dalalka gobolka, waxaan u gudbeynaa marxalad iskaashi iyo wax wada qabsi.”
“Ummad walba waxay horumar iyo barwaaqo ku gaartaa markay isku tashato, wax wada qabsato oo gacmaheedana ku hagar baxdo, sidii ay Soomaali hore u tiri biyo sacabadaada ayaa looga dhargaa.”
Wasaaradda Diinta oo ku dhawaaqdey la bilaabay bixinta Dal-ku Galka Sacuudiga ee Xujeyda Soomaaliyeed
Madaxweynaha J Federaalka ayaa magacaabay Garsoorayaasha Maxkamadda sare ee dalka.
Ra’iisul wasaaraha oo Xilkii Ka Qaaday Wasiirkii Waxbarashada XFS.